​किन विदेशीको गोटी बन्दैछन् नेताहरु ?
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको भित्री सहमति अनुसार वर्तमान सरकार नौं महिना पुगेपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने खबरहरू आएका थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै समयमा स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति समेत भएको थियो । माओवादी पक्षले यही विषयलाई उठाएर सत्ता लम्ब्याउने रणनीति बनाइसकेको छ । स्थानीय चुनावका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ । चुनावका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्कोतर्फ,… विस्तृत समाचार
विवादका कारण रोकिएको ललितकलाको सातौँ प्रज्ञा–सभा सुरु
काठमाडौँ, २४ पुस । नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको लामो समयदेखि बस्न नसकेको सातौँ प्रज्ञा–सभा आज बसेको छ । प्रतिष्ठानभित्रको आन्तरिक समस्याले उक्त सभा निर्धारित समयभन्दा करिब छ महिनापछि बसेको हो । वरिष्ठ कलाकार शशिविक्रम शाह र उत्तम नेपालीले सभाको संयुक्तरुपमा शुभारम्भ गर्दै नेपाली कला तथा संस्कृतिले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विशिष्ट पहिचान बनाएको र त्यसको संरक्षणमा प्रतिष्ठानले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो अवसरमा संस्कृति, पर्यटन… विस्तृत समाचार
काठमाडौं, १९ पुस । देश कता जाँदैछ ? कति वर्षपछि देशलाई धकेल्ने ? युवालाई कति समयसम्म निराश बनाउने ? भन्ने प्रश्न नेपालको हरेक दलको नेतृत्वलाई सोध्यो भने स्पष्ट जवाफ पाउन सकिदैन । माओवादीले एक दशक हिंसामा किशोरकिशोरीलाई उपयोग गरेर देशै बर्बाद पारेकै हो । लोकतन्त्रको पक्षधर बन्दै आएका काँग्रेस र एमालेले समेत युवाशक्तिको उचित सदुपयोग गर्न सकेनन् । पञ्चहरूले त युवाहरूलाई लडाउन भिडाउन उपयोग गर्न… विस्तृत समाचार
चितवन, १९ पुस । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्ने समाचार आएपछि स्थानीय प्रशासनले सडक अनुगमन गरी थप आधा घन्टा सडक रोकेर काम प्रभावकारी बनाउन १३ बुदे निर्देशन दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन गरिएपछि हरेक दिन बिहान १०ः३० देखि दिउँसो तीन बजेसम्म सडक बन्द गरेर काम गर्न निर्देशन दिइएको हो । यसअघि ११ देखि ३ बजेसम्म मात्र सडक बन्द गरेर काम गर्ने… विस्तृत समाचार
दृष्टि विश्लेषण/ काठमाडौं, १२ पुस । जातीय घृणा र द्वेष बढाउने योजनावद्ध घटनाले रक्तरञ्जित इतिहास बोकेका सँसारका धेरै देशहरू आजपर्यन्त कलंकित इतिहासबाट झस्किन्छन् । रगत पखालिएको छ तर हिंसापीडितका सन्तान दरसन्तानमा पीडा बल्झिरहन्छ । चाहे त्यो श्रीलंकाको जातीय हिंसा होस् या रूवाण्डाको नरसंहार नै किन नहोस् । संघीयताका कारण विभाजन खेपेको इथियोपिया नै किन नहोस् । बाह्य शक्तिले थोपरेको जातीयताको भारीले रक्तपातसँगै सामाजिक एकता भाडभैलो… विस्तृत समाचार
​मुलुकका लागि बोझ बन्दै दाहाल र देउवा
काठमाडौं, ५ पुस । सीमांकन फेरबदलको राष्ट्रघाती प्रस्ताव फिर्ता लिएर चाँडो चुनाव गर्न माग गर्दै पश्चिम र मध्यपश्चिममा जिल्लाबासीले आन्दोलन थालेको तीन साता हुन लागेको छ । तर, मुलुकको एउटा ठूलो हिस्साका लाखौँ जनताले दिनहुँ सडकबाट दिएको दबाबलाई सरकारले वास्ता गरेको छैन । उल्टो पछिल्ला केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका अभिव्यक्ति झनझन कठोर बन्दै गएका छन् । उनी भन्दैछन्, ‘कुनै हालतमा संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता… विस्तृत समाचार
नेपाल र रुवान्डा
माधव पौडेल । नेपालमा भइरहेको जातीय द्वन्द्वले अन्ततः रुवान्डाको स्थिति निम्तन सक्छ । त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर रुवान्डाको इतिहास पल्टाउने कोसिस यस लेखमार्फत् गरिन खोजिएको हो । रूवाण्डाको नरसंहार मानव सभ्यतामा कालो धब्बा बन्यो । सय दिनमा आठ लाखको नरसंहार भएको घटनामा हुटु र टुट्सीले एक अर्काको निर्ममतापूर्वक हत्या गरे । नरसंहारकर्ताले बालक, वृद्ध, विरामी कोही भनेनन् । भिन्न जातिको भएका आधारमा पतिले पत्नीको निर्मम… विस्तृत समाचार
देश टुक्र्याउने औजार बने प्रचण्ड
नेपालीहरूमा सबैभन्दा ठूलो द्वन्द्व जमिनको लागि हुन्छ । घरपरिवारभित्रको द्वन्द्वको मुख्य कारण जमिनको बाँडफाँड नै हो । नेपालीहरूको जमिनसँग अर्थतन्त्रको मात्र साइनो छैन भावनात्मक साइनो पनि छ । त्यसैले एक इञ्च जमिनका लागि छिमेकीसँगको झगडा समेत सामान्य हुन्छ । नेपालको सामाजिक चरित्र र विशेषताबारे जानकार विदेशीहरूले झगडा बढाउने शैली अपनाए, नेपालमा संघीयता लादेर । मिसनका साथ आएका आइएनजीओ र खुफिया एजेन्सीहरूले नेपालभित्रका लोभीपापी नेताहरूलाई प्रयोग… विस्तृत समाचार
काठमाडौँ, १९ मङ्सिर । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठक पनि संविधान संशोधनका विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लगायत दलको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगन भएको छ । सरकारले संशोधनको विधेयक दर्ता गरे पनि सदन अवरुद्ध भएको यो तेस्रो दिन हो । बैठकका प्रारम्भमा विपक्षी सांसदले आफ्नो स्थानबाट उठेर अवरोध गर्नुभयो । त्यसपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले समय दिएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अनुराधा थापा मगरले संविधान संशोधनमा… विस्तृत समाचार
काठमाडौं, १४ मंसिर । योगगुरु रामदेवको योग शिविरमा नेताहरु मात्र होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख ओनसरी घर्ती मगरदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासम्म पुगे । मुलुकका विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई नै आफूकहाँ तान्ने शक्ति के छ रामदेवमा ? उनी योगका गुरु त हुन् नै । उनले यसलाई नै आधार बनाएर आफ्नो व्यापार बढाइरहेको छर्लंग छ । व्यापारलाई दिन दुई गुणा, रात चार गुणा बनाउन… विस्तृत समाचार